दुई घण्टे मोदीको जनकपुर भ्रमणमा जनकपुरको साँचो मोदीलाई बुझाउने तयारी ! – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / दुई घण्टे मोदीको जनकपुर भ्रमणमा जनकपुरको साँचो मोदीलाई बुझाउने तयारी !
दुई घण्टे मोदीको जनकपुर भ्रमणमा जनकपुरको साँचो मोदीलाई बुझाउने तयारी !
Anurag Post May 2, 2018	अनुराग पोष्ट, अन्तराष्ट्रिय, प्रवासी, राजनीति Leaveacomment 573 Views
जनकपुर । भ्रमणमा आउदा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुरधामको साँचो बुझाउने तयारी भईरहेको छ । धार्मिक तथा ऐतिहासिक शहर भएपनि विकास निर्माणमा पछि परेकोले जनकपुरको विकासलाई कसरी अगाडी बढाउने जिम्मेवारी सहित जनकपुरको साँचो मोदीलाई दिने मेयर लालकिशोर साहले बताए ।
पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री जनकपुरको भ्रमण गर्न लागेकोले त्यसलाई सफल बनाउन स्थानीय नागरिक समाजलाई समेत आग्रहा गरेका छन्।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिका मा छ ।
Previous मोदी भ्रमणको स्थलगत अनुगमनमा आएको हेलिकप्टर निषेधित क्षेत्रमा अवतरण
Next केरा काटेर नष्ट गर्नेको खोजी गरी कारवाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन